Waxba Uu Ku Galgalan Gobol Cusub Iyo Dagmo Cusub | Somaliland.Org
Waxba Uu Ku Galgalan Gobol Cusub Iyo Dagmo Cusub
April 30, 2008	Waxaa bishii ina soo dhaftay aynu ka warhaynay in madaxwayne rayale uu magacabay isla markana uu sameyay gobolo cusub oo uu kusoo kordhiyay goboladii hore dalka uga jiray tasi oo nuxurka ka danbeeyay uu ahaa oo kaliya in kanbaynka uu ku galo isaga oo u qaatay in dadku ay caleema qoyan kusoo dhawaynayaan haduu goboladaasi magacabo. kadib markii uu ku dhawaqay magacawga goboladaasi waxa aynu aragnay in dadbadan oo goboladaasi ka tirsani si dhakhsa ah ay uga soo horjeesteen iyada oo goboladaasi oo shegay meela ka midana lagaga mudaharaaday iyada oo loo muujinayo in goboladaasi ay yihiin arrin bulshada Somaliland lagu kala qaybinayo.
Hadaba waxaa wakhtigan xadirka maragmadoon ah in madaxwayne rayaalaha wakhtigiisii doorashadu uu ku egyahay 15/5/08 oo hadda ay inaga xigaan uun laba wiig. waxaa soo baxday in madaxwayne rayale isaga oo ku gabanaya golaha deeganka ee hargaysa uu ku amray in ay ku dhawaaqan in ay kala gooyaan oo jarjaraan dagmooyinka casimada hargaysa kasi oo golaha deganka ee hargaysa uu ku dhawaqay in sadax dagmo oo cusub uu ku daray 5 dagmo ee hore isaga oo u qayb qabiyay sidan.
1. dagmada g/libaax oo la odhan karo waa dagmada ugu wayn hargaysa ayaa waxa uu ka jaray qaybta dhinaca waqooti oo dhan iyada oo uu u bixiyay mujaahidkii waynaa ee ina macalin haruun,
hadii dagmadasi iyo sida loo samaynayo xududaheeda aan wax ka qiyaaso waa sidan
Waxaa laga yaba in xafada cabeye gaar ahaan qaybta xigta dhinaca bari la raciyo xafada cusub ee ay wakhtigan ka noqdeen, isla markana dhinaca xafada m/xarbi marka laga bilabana waxaa muqata in laga bilabo dhinaca waqooyi ee balayga dami in ayana la raciyo xafada cusub ee hada la lalay kadib markii dhibatadu ka dimi.
2. dhinaca dagmada m/haybe oo la odhan karo waa xafada labaad ee ugu wayn hargaysa ayaa ayana waxaa laga jaray xafadii hore loo odhan jiray maxamad mooge.
Hadaan wax ka taatabto xududaha ay dhici karto in loo samayn lahaa hadii ay hirgali lahayd waa sidan.
kasoo bilaw dhinaca bari ee maxamad moge ilaa waxa ad kalaydaa istar kadibna dib usoo noqo kalay calamadaha hadana ka noqo saba xareed ilaa aad galayso warshada kabista waa inaha aan isorankaro dagmadasi way kasoo dhexsari lahayeen haday usura gali lahad.
3. dhinaca dagmada axmad dhagax oo ah dagmada ay dhibatadu ka dhacday dagmada cusub waxa ay ka bilabi lahayeen qiyaastayda badhtamaha isha borame halkii la odhan jiray ilaa xafada cusub ee qandahaar raac ilaa warshadii biibsiga ilaa aad ka garayso doxa hargaysa halka ay ku qaybsaman juun iyo a/dhagax
Runtii ma aha wax xun marka waxkasta loo racayo sharciga lakiin waxan oo dhami waa gobolo iyo dagmooyin kanbayn.
Hadaba waxaa hubala in madaxwayne rayale ka danbeyay dhamaan dhibatoyinka ka dhacay mudaharadkii dagmada a/dhagax isla markana uu ahaa ninka soo amray golaha deganka waayo mayarka casimada hargaysa jiciir waa nin xisbi ahaan kasoo jeda UDUB tasina waxa ay ku tusaysaa in dhibatada dhacday ay ka danbeyeen xisbiga UDUB.
Wasiirka dakhiliga oo iska dhigay n dadka wax u qabtay isaga oo u balan qaday in cidii dhin aan waxan dhacay warka hayn ama aan la socon magacabista dagmoyinkan ayaad dadka ku beer laxawsaday in ay wax ka qaban doono amma sharciga lala tigsan doono cidii ka danbaysay madacawga dagmooyinkan kuwasi oo uu u jeday golaha deganka hargaysa. hadiiba ay dhacdo in madaxwaynaha iyo gaar ahaan wasiirka dakhiligu anay warka hayn arintan dagmoyinka cusub tasi waxa ay i tusinaysaa in ay yihiin aqon lawayaal mesha iska fadhiya lakiin waa hubaal in ay ka danbeyeen.
Bilahi caleeg ma waxa aynu dhagaysaanaa madaxwaynaha iyo wasiirka dakhiliga lagalama tashan magacabis dhan oo casimada lagu kala qaybinayo taas dameero u sheega.
Cali maxad warancade kolay dhankayga waa wasiir muctarafa kana soo baxa hawlaha qaranku u igmado lakiin cali waxa a an leyahay saxiib ka dhagaysan mayno madaxwayne rayale arintan lalama socodsiin, hadii sida aad u shegayso ay tahay calaw dee maxaynu ku wada hadlaynaa mesha iskaga dareera.
Waxa aan qorankayga kusoo gaba gabaynayaa madaxwayne rayale wakhtigisii waa dhamatay waxba uu ku galgalan gobol cusub iyo dagmo cusub dorashada raga sani hawla galo ama macasalama xilka wa ku fashilmee ha iska casilo.